တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ချိုတမြမြ … ခါးသလေလေ့ …
Posted by မေဓာဝီ at 8:45 AM
အားပါးပါး.. ၀ါရင့်ပညာရှင်ပါလား အမရယ်.. ထန်းရည်ကို ဖွဲ့နွဲ့ထားတာများ အမျိုးသား ထန်းရည်သမားတွေ နောက်ကောက်ကျလောက်ပါရဲ့။ ဒီစာဖတ်ပြီး ကျနော်လဲ လေချဉ်တက်လာတယ်ဗျ.. ထန်းရည်ကို အာပြဲခြောက်ကြော်နဲ့မြည်းတာလဲ ကောင်းတယ်ဗျ.. ကြွက်ကြော်ဆို ပိုကောင်း။ :P
That's isagood one indeed, the art of drinking toddy... :P
Please come and join, you are invited to come to my native town where there are plenty of toddy trees as well as plum trees.
I like yesterday POST that was about PLUM tree too.
TODDY is very natural compared to the modern beer, there are two kinds, SWEET ,fresh one which is very sweet, without yeast, this kind can be get normally in the early morning, the best time is when the man just climb down form the tree.
The others is the bitter, which include yeast, that can available the whole day and suitable with beans salad as you said in the post.. really ...YUMMY... then.. ...
Drinking toddy form the smoked black collecting pot with coconut cups.....then try to getaride with your bike ... How niceeeeeeeee.....
THE ART OF DRINKING TODDY :)
Not many country can get that kind of things in this world.....
1/15/2007 1:23 PM
ဟုတ်ပ၊ တညင် (သံလျင်)၊ ပါဒကြီးနားမှာ၊ အတွင်းထဲနဲနဲ ၀င်သွားရတဲ့ ထန်းရည်ဆိုင်။ သောက်ပြီးနောက်နေ့ ဗိုက်နာတဲ့ သူငယ်ချင်းလဲရှိတယ်။ မမေဓါပြောသလို ပဲခြမ်းသုတ်က အဓိက အမြည်းပါဘဲ။ လွမ်းလာဘီဗျာ။
1/15/2007 4:33 PM
ဟုတ်တယ် ထန်းရည်နဲ့ အလိုက်ဆုံးကတော့ ပဲခြမ်းကြော်သုပ်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် လယ်ကြွက်ကြော်လေးနဲ့လဲကောင်းပါ့နော်၊ ပြီးတော့ ကွပ်ပျစ်ပေါ်အကျအနထိုင်ပြီး သောက်ရတာပိုကောင်းတယ်ဗျ၊ ထိုင်နေရာက ထလိုက်တာနဲ့ မူးဝေေ၀လေး တစ်မျိုးပဲ၊ လေတိုက်ရင် ပိုးမူးရော.... :)
1/19/2007 12:49 PM